MYANMAR POLITICAL NEWS, ART AND IDEA: MYANMAR MILITARY ANIMALS?
MYANMAR MILITARY ANIMALS?
ပြီးတော့ ဒီ အဟိတ်စစ်အဆိုးရလက်ထက်ကျမှ ငွေစက္ကူတွေကို ဂဏန်းတိုးတိုးပြီး ထုတ်လာလိုက်တာ အခုဆို ၅၀၀၀ ကျပ်တန်ဆိုပြီးတော့တောင် ဖြစ်လာပါတယ်။ အင်း ... ဒီ အဟိတ်တိရိစ္ဆာန်စစ်အဆိုးရသာ ဆက်ရှိနေရင် နောက်များဆို ဇင်ဘာဘွေနိုင်ငံမှာလို သောင်းတန်၊ သိန်းတန် ငွေစက္ကူတွေ ဘာတွေတောင်
Posted by Nyo Gyi at 26.9.09
Labels: MY WRITINGS, PHOTOS, SATIRE
Declaration of 2nd Anniversary Saffron Revolution ...